पाखुराको मांसपेशीमै किन लगाइन्छ खोप? यस्ता छन् कारण – Health Post Nepal
पाखुराको मांसपेशीमै किन लगाइन्छ खोप? यस्ता छन् कारण
२०७९ वैशाख ३ गते ९:३९
कोरोना खोप पाखुराको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा लगाएको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। कोरोनामात्र नभई अधिकांश खोप यही स्थानमा लगाइन्छ। तर किन खोप सधैं पाखुराको यही भागमा मात्र किन लगाइन्छ? विज्ञका अनुसार ‘डेल्टाइड’ भनिने यो भागमा खोप लगाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ। रगतको आपूर्ति सबैभन्दा बढी हुने भएकाले पनि मांसपेशी बढी हुने भाग रोजिन्छ। यहाँ खोप लगाउँदा एन्टिजेन शरीरमा चाँडै फैलन्छ।
यसकारण लगाइन्छ मांसपेशीमा खोप
वास्तवमा मांसपेशीमा एक सुरक्षात्मक प्रणाली हुन्छ, जसको माध्यमबाट रगतको आपूर्ति राम्रोसँग हुन्छ। खोपमा रहेको आल्मुनियम साल्टजस्ता तत्व यो स्थानबाट दिँदा गम्भीर रियाक्सन पैदा पनि गर्दैन।
यदि खोप छालाको बाहिरी पत्रमा लगाउने हो भने कैयौं समस्या सिर्जना हुनसक्छन्। यसैले खोप मांसपेशीको माध्यमबाटै शरीरमा पठाइन्छ।
कुन ठाउँमा लगाउँदा दुख्छ?
खोप छालाको कुनै तन्तुमा लगाउँदा केही मांसपेशी दुख्ने स्थिति बन्छ। तर पाखुराको माथिल्लो भागमा लगाउँदा त्यतिधेरै दुख्दैन, जति अरु स्थानमा लगाउँदा दुख्छ। रेबिजको स्थितिमा केही खोप हातमा लगाउँदा टिस्यु र कोशिकाको प्रतिरोधी क्षमता बढाउने काम गर्छ।
केही अध्ययनहरुमा के पाइएको थियो भने चाहे पुरुष हुन् या महिला, मांसपेशी र छालाबीच रहेको पत्र पातलो हुन्छ। यो पत्र डेल्टाइड मांसपेशीकै आसपास हुन्छ।
डिपो इफेक्ट नदेखियोस् भनेर खोप सिधै नसामा लगाइँदैन। खोपको असर लामो समयसम्म रहिरहोस् र विस्तारै शरीरमा जाओस् भनेर मांसपेशीमा लगाइन्छ। यदि नसामा लगाउने हो भने सिधै रक्तप्रवाहमा गएर तीव्र रुपमा अवशोषित हुन्छ। जबकि मांसपेशीमा लगाउँदा शरीरले खोप अवशोषित गर्न समय लाग्छ।